[Ciyaarta] 'Waxay ka timid meel bannaan, waxayna cuntay maskaxdeena'. Noolow, intaad kari karto. | Laga soo bilaabo Linux
[Ciyaarta] 'Waxay ka timid meel bannaan, oo cuntay maskaxdeena'. Badbaadi, intaad kari karto.
Waxaan aragnaa annaga oo magaalada dhex mushaaxeyna, kaliya waxaan gacanta ku heynaa toosh iyo qori. Magaalada waxaa ku soo duulay dad ajnabi ah, nabadna kuma imaanayaan. Waxay rabaan maskaxdeena !! Adigaa keligaa ah, iskudayeysa inaad noolaato, laakiin… ma aha muddo dheer.
Hordes of shisheeyaha ayaa naga soo weerara dhan walba, nafsaddaada u difaac inta aad awooddo, adiga oo raadinaya hub cusub iyo qaabab aad isaga difaaci karto hirarka shisheeyaha ee sii kordhaya ee aan waligood joogsan.
1 Ciyaarta Indie
Waxaan dhawaan helay, boggan oo bixiya meel loogu talagalay horumarinta cayaaraha indie abuurtaada ogeysii. Oo malee waxa, waxaan leenahay guud ahaan qaybta kuwa aan ku ciyaari karno GNU / Linux.
Dhexdooda, waxaan la kulmay ciyaartan quruxda badan, oo ah "100% Dhimis" 10-ka bilood ee soo socda! Kuwa doonaya, waxay ku iibsan karaan qiimo kasta oo ay doonayaan.
Xogta 10-ka bilood ee dalabkan waxaa si toos ah looga soo qaatay bogga aan kor ku soo sheegnay, waqtiga maqaalka la daabacayo.
Runtii waa ciyaar aad u xiiso badan. Isla markii aan bilawnay, sawiradeedu ma nala yaabin karto, laakiin waxay u soo baxday inay leedahay goob aad u fiican, iftiin wanaagsan iyo maarayn meel bannaan oo aad u fiican marka laga hadlayo dhawaaqa hareeraha; sameynta ciyaartan madadaalo weyn.
Shaashadda shaashadda ciyaarta.
Waxaan kuu xaqiijinayaa, maadaama aad sii noolaaneyso muddo dheer, aad ka quusan doonto inaad sii noolaato. Way baqi doonaan, waxayna toogan doonaan wixii ay maqlaan ama dhaqaajiyaan. Oo markay u maleeyaan inay wada arkeen, wax cusub ayaa ka yaabi doona iyaga. 🙂
Waxaan rajaynayaa inaad ka heshay, oo la madadaaliyay. Maskaxoodana ha cunin, is difaac! 😀
Bogga rasmiga ahSoo Degso / Iibso
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Ciyaaraha » [Ciyaarta] 'Waxay ka timid meel bannaan, oo cuntay maskaxdeena'. Badbaadi, intaad kari karto.
Waan necbahay inaan awoodin inaan ku bixiyo lacagta qalaad, laakiin sida weyn ee ciyaalka yar ee fucking u eg xD
Sabab badan awgood, ka faa'iideyso hadda inay iyagu dalab yihiin oo waad soo dejisan kartaa adigoon wax kale sii kordhin. Waan jeclahay ciyaaraha indie. 🙂
Horey ayaan ugala soo dagay runtiina waa madadaalo, in lala qaxweeyo kafeega ka dib… Aad u wanaagsan!…
Ku jawaab edgar.kchaz
Maxaa ku dhacay amarkaygii adeegsiga? ...
Calanka wakiilada isticmaalaha ayaa dib loo qaabeeyey. Sidaa darteed sababta astaanta Debian aysan mar dambe uga muuqan wakiilkeyga isticmaale (Ma aqaano, laakiin weaselkeygu wuu ka raaxo badan yahay astaanta Debian iyo Arch marka loo eego Tux).
Farxad ayey noqon laheyd haddii laga heli lahaa Steam si aan u bixiyo oo aan ula wadaago guulahayga. Si kastaba ha noqotee, Faras hadiyad ah ma fiirinayo iligga.
Waa hagaag, dhab ahaantii waxay ku jirtaa Steam Greenlight. Waad u codeyn kartaa iyaga oo ku daawan kartaa Steam.
Dhankeyga, waxaan door bidaa ciyaaro ka baxsan barxada Steam, oo ah hooyo.
Jidka agtiisa, madal ciyaareedku waa mid cajiib ah. Aynu aragno haddii aan ku dhiiran karo in aan abuuro ciyaar oo aan halkaas ku daabaco (tan iyo markii loo yaqaan 'Steam', hawshu aad ayey uga badan tahay xafiisyada xafiisyada).
Waa wax aad u xiiso badan, sida haddii la dilo saacadahaas bilaashka ah ee jaamacadda.
Waad ku mahadsantahay wadaagida waa mid aad u balwad leh!
Waan ku faraxsanahay inaad jeceshahay .. ..Waad ku mahadsantahay ra'yigaaga;) ..
Waxay aad ugu egtahay Shisheeyaha Shisheeyaha (Alien Swarm), oo waliba aad u fiican inkasta oo xoogaa la joojiyay horumarkiisa.
Waa run, anigu ma aanan aqoon isaga. Waan jeclahay nidaamka wada shaqeynta kooxda. Aad ayey u xun tahay daaqadda uun baa loo eegaa.
Wanaagsan! Waxba lamid ma ahan waqti-yaqaan wanaagsan!
Khadka tooska ah wuxuu ka bilaabanayaa dukaanka Mawduuca u gaarka ah Android
KDE 4.13, Nepomuk iyo Baloo